गर्भवती महिलालाई स्वस्थ बच्चा जन्माउने वातावरण बनाउन आवश्यक – सुदुरन्युज डट कम - SudurNewsNP – ताजा समाचार, सूचना अथवा भिडियो हरु
द्वारा : सुदुर न्युज August 24, 2018
काठमाडौं , भाद्र ८, २०७५ ।
विवाहित महिला गर्भवती हुनु र स्वस्थ बच्चा जन्माउनु नेपालको संविधान २०७२ मा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
तर नेपाल गरिबि र अभावमा गुज्रीएको आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर मुलुक हो ।
यस्तो अवस्थामा संविधान र कानूनले ती गरिब महिला जो गर्भवती छन् उनका लागि सकुशल स्वस्थ बच्चा जन्माउने वातावरण कुन अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा तय गरेको छ ?
महिला गर्भवती बने देखि बच्चा जन्माउने बेला सम्म पटक पटक मरेर ठूला ठूला चुनौती पार गर्दै सघर्ष गर्छिन् ।
यस्तो अवस्थामा राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भने घरपरिवार, आफन्त, समाज, छरछिमेकिले समेत उत्तिकै सहयोग र सद्भाव देखाउँनुपर्छ ।
कानूनी भाषामा जेसुकै लेखिएको भएता पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन भन्ने कुरालाई बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं ६ की १८ बर्षिया सुमित्रा विकको घटनाले छर्लङ पार्दछ ।
सुमित्र विक बहुविवाहको केसमा जेठीको उजुरी अनुसार २०७५ साल असार ९ गते धुनामा परिन ।
उकानूनी कारवाहीको भागीदार बनिन र काभ्रेको धुलिखेलमा रहेको जेलमा थुनामा परिन् ।
उनी गर्भवती भएको र बच्चा जन्मने बेला भैसकेकाले उनका श्रीमान् कुमार थिङ्गको आग्रहमा सुमित्रालाई २०७५ साल श्रावण २५ गते तारिखमा छोडियो ।
उनका श्रीमान् कुमार थिङ्ग जेलमै छन् ।
सुमित्रा विहिवार तारिख तोकिएकाले जिल्ला अदालत धुलिखेलमा हाजिर हुन् आईन् ।
उनलाई बाटो देखिनै प्रशव बेथाले च्याप्यो ।
उनी सकी नसकी अदालत पुगेर हाजिर गरि सरासर काठामाडौ विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पताल तथा सामुदायिक अस्पताल धुलिखेलको प्रसुति वार्डको आकस्मिक कक्षमा पिता र सहयोगी रेशम बिकका साथ पुगिन् ।
रेशम बिक भन्छन् ः सुमित्रा दुई दिन लगातार हिडेर यहि भाद्र ७ गतेको तारिख भ्याउन धुलिखेल आउँदा गाह्रो भएको रहेछ ।
उहाँको बुबाले धुलिखेल अस्पताल ल्याउनुभएको रहेछ म पनि बच्चा बिरामी भएकाले धुलिखेल अस्पतालमै थिए ।
उहाँहरुले मलाई भेट्नुभयो ।
मानवीयताको नाताले मैलै धुलिखेल अस्पतालको प्रसुति वार्डको आकस्मिक कक्ष सम्म पुर्याउन सहयोग गरे ।
अस्पतालमा नर्सहरुले सुमित्राको परिचय लिनुभयो । मैले उहाँको श्रीमान् कुमार थिङ्ग बहुविवाहको केशमा जेलमा रहनुभएको र उनी धरौटीमा छुटेको बताए ।
नर्सहरुले आफुभन्दा सिनियरलाई खबर गरे ।
सिनियर नर्स आएर सुमित्रालाई भर्ना गर्नुपर्छ । बच्चा सजिलै जन्मिएन भने अप्रेशन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, रगत चाहिन्छ, आईसीयु पनि चाहिन सक्छ भन्नुभयो ।
नर्सहरुको सल्लाह अनुसार सुमित्राको बुबाले छोरीलाई भर्ना गर्ने भन्नुभयो । एकजना चिकित्सक आएर तपाईहरुको पुलिस केस रहेछ थापाथली लैजानुस हामी यहाँ हेर्दैनौ भन्नुभयो ।
हामीसँग साधन पनि छैन पैसा पनि छैन सुमित्राको ज्यान बचाउन पाए पैसा त हामी पछि ल्याएर तिरौला ।
भोली सम्म म पैसा जुटाउँछु भनेर सुमित्राको बुबाले भन्नुभयो । चिकित्सकले भर्नाको लागि डिपोजिट राख्नुपर्छ भन्नुभयो ।
साथमा पैसा नभएका कारण हामी निराश भएर बाहिरियौ ।
अन्तमा मेरो धुलिखेलमा रहेको कोठामा ल्याएर राख्ने पैसाको बन्दोबस्त गरेर थापाथली लैजाने भनेर बाहिरियौ ।
पुनः चिकित्सकले बोलाएर २ वटा घर खुलिसकेको छ, बच्चाको धड्कन राम्रै छ डिपोजिट राख्नुस् भर्ना हुन्छ भन्नुभयो ।
हाम्रो साथमा जम्म १ हजार रुपैया मात्र थियो । त्यतिले हुन्न थापाथली नै लैजानोस त्यहाँ भए निःशुल्क हुन्छ भन्नुभयो ।
सहयोगी रेशमका अनुसार सुमित्राको बुबा पैसा खोज्न भकुण्डे तर्फ लाग्नुभयो ।
सुमित्रालाई कोठामा ल्याएर राख्यौ । रातभरी पनि उनलाई प्रशव वेथाले च्यापीरहयो । उनको बुबा आईपुग्नुभएन । विहान भएपछि निकै गाह्रो भयो । पैसा नभएका कारण अस्पताल लैजान सकेनौ ।
अन्तमा शुक्रवार विहान १० बजे देखि छरछिमेकका आमा बिष्णुमाया कार्की, दिदीहरु शर्मिला तामाङ, संगिता साँहु,अमृता महतो, इन्दिरा कार्की लगायतको सहयोग र अथक प्रयासमा दिनको १ बजे नवजात शिशुको घरमै जन्म भयो ।
बच्चा घ्यार घ्यार गरिरहेको छ, दुध चुसेको छैन र आमाको दुध पनि आएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा हामी जस्ता गरिबका लागि लोकतन्त्र, सरकारको फोस्रो नारा संविधानमा उल्लेख गरिएको स्वास्थ्य सेवा आम जनताको नैसर्गिक अधिकार भन्ने लेखाईले केही गर्दो रहेनछ ।
म आफ्नो बिरामी बच्चालाई अस्पतालमा छोडेर यता सुमित्राको समस्याको स्याहारमा जुटेको छु ।
रेशम ज्यामी काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्दै आएका एक मनकारी व्यक्ति हुन् ।
उनकै सहयोगमा आज सुमित्राको बच्चा त जम्मियो ।
आर्थिक अवस्थाका कारण उनको पोषण र बच्चाको रेखदेख गर्न सक्नेपरिवारको अवस्था छैन ।
सुमित्राका श्रीमान पनि जेलमा छन् ।
यो अवस्थामा विष्णुमाया कार्काी लगायतका छिमेकीहरु उनको सहयोगका लागि दाल, चामल, नुन, तेल जुटाउन तल्लिन भएका छन् ।
बिष्णुमायले सुमित्रालाई देख्दा अत्यन्तै दयनिय अवस्था भएकाले आफुले आमा, बच्चाको लागि न्यानो कपडा, खाद्यान्न उपलब्ध गराएको बताउँनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ–बच्चा जन्मिए पनि आमाको दुध पनि चुसेको छै र स्वास फेराई पनि अत्यन्तै गाह्रो देखिएको छ ।
आमाको उमेर नै पुगेको छैन ।
आफ्नै घरछेउमा देखे माया लाग्छ, सरकारले पनि वास्ता नगरेको सुन्दा दिक्क लाग्छ ।
नियम कानून जे भए पनि पहिला त मान्छे बचाउनुपर्ने हो ? हुनेका लागि मात्र सबैथोक हुँदो रहेछ गरिबका लागि दुःखै दुःख ।
स्वास्थ्य नीतिमा हेर्ने हो भने नवजात शिशुलाई न्यानो बनाएर राख्ने, बच्चा जन्मदा २ किलो ५ सय ग्राम भन्दा कम तौलको छ भने मायाको अंगालोमा राख्नुपर्छ । शिशु जन्मेको २४ घण्टा भित्र दिशा गरिसकेको हुनु पर्दछ ।
४८ देखि ७२ घण्टा भित्र पिसाब फेरेको हुनुपर्छ ।
यसका लागि बालरोग विशेषज्ञको परामर्श लिनुपर्छ । शिशु जन्मेको २ देखि ४ दिनमो सामान्य पहेंलो देखिए पनि आमाले चिल्लो, बेसार जस्ता खानेकुरा बार्नुपर्दैन बरु चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ भनिएको छ ।
नेपालका लागि सुमित्रा एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन उनले कसरी लिने चिकित्सकको सेवा ?
सुमित्रा प्रशव वेथामा छटपटाईरहँदा एउटा पातलो म्याक्सीमा थिईन र उनको शरिर पुरै चिसो हिउँ जस्तै भएको थियो ।
छिमेकी आमा, दिदीहरुले आफ्नै कपडा लगाईदिने, दुध, घिउ, तताएर खान दिने, तेल तताएर लगाईदिने, आसनलाई सहज बनाउने जस्ता सहयोग जुटाएकै कारण उनको जिउ छुट्यिो नत्र के हुन्थ्यो ?
मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भवन निर्माणकाे लागत १२ करोड बढ्ने
निर्मला हत्या प्रकरण: पिडित परिवारलाई १० लाख राहत, प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका सन्नी शहिद घोषणा